Mpanamboatra sy mpamatsy China Cenosfera (Microsfera) Beihai Fiberglass
1.Fly bolongana lavenona afaka mitsingevana eny ambonin'ny rano.
2. fotsy fotsy fotsy izy io, misy rindrina manify sy poakaty, lanja maivana, lanja mavesatra 250-450kg / m3, ary haben'ny sombin-javatra manodidina ny 0,1 mm.
3.Nampiasaina betsaka tamin'ny famokarana hazavana mavesatra ary fandavahana menaka ary amin'ny indostria maro.
Cenosfera dia karazan-baolina poakaty lavenona afaka mitsingevana amin'ny rano. Fotsy fotsy fotsy izy io, misy rindrina manify sy poakaty, lanja maivana, lanja mavesatra 250-450kg / m3, ary habe amin'ny sombin-tsavony manodidina ny 0,1 mm.
Mihidy ny faritra ary milamina, ambany fitondran-tena ambany, fanoherana ny afo ≥ 1700 ℃, reflexative insulation thermique tena tsara izy io, be mpampiasa amin'ny famokarana hazavana mavesatra sy fandavahana menaka.
Ny firafitry ny simika fototra dia ny silica sy ny aluminium oksida, miaraka amin'ny sombintsombiny tsara, poakaty, lanja maivana, tanjaka avo, fanoherana amin'ny fitafiana, fanoherana ny hafanana avo, insulation thermal, retardant flame insulation ary asa hafa, izay be mpampiasa ankehitriny amin'ny indostria maro.
fifehezan SiO2 A12O3 Fe2O3 SO3 CaO MgO K2O Na2O
Votoatiny (%) 56-65 33-38 2-4 0.1-0.2 0.2-0.4 0.8-1.2 0.5-1.1 0.3-0.9
Vovoka boribory mahery vaika
Fanoherana herinaratra （Ω.CM）
Ny hamafin'i Moh
Density be （g / cm3)
System Rafitra fanaparitahana rano）
Afo isa ℃
Coefficient fitondra hafanana
Hery matanjaka （Mpa）
Fitrohana solika g (solika) / g
Mandany ny tahan'ny
(1) fanoherana afo avo
(2) Mavesatra maivana, insulation hafanana
(3) Hatsatra avo, tanjaka avo
(4) Ny insulation dia tsy mitondra herinaratra
(5) Ny haben'ny sombintsombiny tsara sy ny velaran'ny faritra manokana
(1) Fitaovana fanamafisana tsy mahazaka afo
(2) Fitaovana fananganana
(3) Indostrian'ny solika
(4) Fitaovana mitaingina
(5) Indostrian'ny firakotra
(6) Fampiroboroboana ny habakabaka sy ny habakabaka
(7) Indostrian'ny plastika
(8) vokatra plastika nohamafisin'ny vera
(9) Fitaovana fonosana
Teo aloha: Microspheres vera lava
Manaraka: Ravina FRP